Dhacdoyinka | MOEACCPL
Category Archive : Dhacdoyinka
Wasiirka wasaarada Deegaanka, Beeraha iyo isbedelka Cimiliada Prof,Ismaaciil Diiriye Gamadiid ayaa kulan la qaatay Odayaasha iyo nabadoonada gobolka Nugaal waxaana shirkaan oo looga hadlayey arimaha ilaalinta deegaanka, ka hortaga xaalufka, ilaalinta dhuldaaqsimeedka iyo arimo kale oo muhiim ah ka qaybgalay Maamulka gobolka Nugaal iyo xildhibaano kamid ah golaha shacabka ee Puntland kuwaas oo laga soo doorto gobolka Nugaal.
Wasiirka Wasaarada Deegaanka, Beeraha iyo isbedelka cimilada DPL mudane, Ismaaciil Diiriye Gamadid iyo Kusimaha Gudoomiyaha Hay,adda Wadooyinka PUNTLAND Cabdirasaaq Maxamed Xayir iyo Khuburo ka socota hay,adda PHA ayaa maanta kullan looga tashanayo sidii wax looga qaban lahaa Ciid Bacaad ah oo xirtey wadada xiriirisa degmada Jariiban iyo Deegaan xeebeedka Garacad oo ka tirsan Gobolka Mudug.
Wasiirka wasaaradda Deegaanka, beeraha iyo Isbedelka Cimilada DPL Prof, Ismaaciil Diiiriye Gamadiid oo ay weheliyaan agaasimeyaal iyo Injineero ka tirsan Wasaarada Deegaanka, Maamulka degmada Garoowe iyo xubno kale ayaa booqday Deegaanka Caano-yaskax ee gobolka Nugaal halkaas oo ah dhul beeralay ah dhawaana ay ka dilaaceen boholo saamayn weyn ku yeeshay dhul-daaqsimeedka iyo wadooyinka deegaankaas.
Wasiirka wasaarada Deegaanka, Beeraha iyo Isbadalka cimilada DPL Mudane, Ismaaciil Diiriye Gamadiid ayaa dhagax dhigay xarun lagu kaydinayo Abuurka beeraha Puntland, waxaana dhagax dhiga Kaydka Abuurka Beeraha ee Puntland oo ka dhacday deegaanka beeralayda ah ee Cuun ka qaybgalay madax katirsan wasaaaradda, Maamulka degmada Garoowe iyo Madaxda hay’adda gargaarka iyo hormarinta Kaalo.
Wasiirka Wasaarada Deegaanka iyo Beeraha oo kormeeray Beeraha Laacdheere iyo Rabaable ee gobolka Nugal.
Wasiirka wasaarada Deegaanka Beeraha iyo isbedelka cimilada DPL mudane, Ismaaciil Diiiriye Gamadiid oo uu weheliyo agaasimaha guud ee wasaarada Mudane, Cabdicasiis Nuur Cilmi “Koor” ayaa kormeer ku sameeyey xarumo kaladuwan oo ay leeyihiin Iskaashato Beeralay Deegaanada Laacdheere iyo Rabaable oo katirsan degmada Garoowe.
Wasiirka Deegaanka oo soo xiray tababar ku saabsan Xiririinta iyo Qiimaynta Mashaariicda ay wadaan qaarkamid ah hay’adaha wasaarada la shaqeeya.
Wasiirka wasaaradda Deegaanka, Beeraha iyo isbedelka cimilada Ismaaciil Diiriye Gamadiid ayaa soo xiray shir kusaabsanaa xiriirinta iyo qiimaynta Mashruuca Cunto lacag ku badalashada oo ay wadaan wasaaradd Deegaanka iyo hay’adda FOA waxaana shirkaan kasoo qaybgalay hay’adda mashruucaan wasaaradda la wada.
Wasaarada Deegaanka Puntland oo Aqoon korarsi ku saabsan maaraynta arimaha Deegaanka u kaxaysay qaar kamid ah bulshada Xarfo Iyo Burtinle.
Wafti uu hogaaminayo Wasiir kuxigeenka wasaarada Deegaanka, beeraha iyo Isbedelka cimilada DPL mudane, Maxamed Xassan Ciise ayna kamidyihiin saraakiil ka tirsan Wasaaradda, odayaasha, waxgaradka, dhalinyarada iyo qaybo kaladuwan oo kamid ah bulshooyinka kunool deegaamada Jalam iyo Xarfo ayaa booqday degmooyinka Eyl, Dhahar iyo Iskushuban kuwaas oo mudo asbuuc ah kulamo la qaadanayey qaybaha kaladuwan ee bulshada.
Wasiirka Deegaanka oo xariga ka jaray Biyo Xireen cusub.
Wasiirka wasaarada Deegaanka, Beeraha iyo Isbedelka Cimilada, DPL mudane, Ismaaciil Diiriye Gamadiid agaasimaha guud ee wasaaradda, Agaasimaha wasaarada Qorshaynta iyo iskaashiga caalmiga ah ee Puntland, xildhibaano iyo xubno kale oo katirsan dawlada Puntland ayaa xariga ka jiray War-Biyood ay hay’adda Salaam Development center “SDC” oo kaashanaysa bulshada Deegaanka Ilma-adeer iyo Hay’ada WFP ka sameeyeen isla deegaanka Ilma-Adeer oo ka tirsan degmada Garoowe ee caasimada Puntland.
WASAARADDA DEEGAANKA OO WACYIGELIN KU SAABSAN BAAHINTA SHURUUCDA IYO XEERARKA DEEGAANKA KU QABATAY BUURTINLE IYO XARFO.
Wasaaradda Deegaanka, Beeraha iyo Isbedelka cimilada Dawlada Punntlan ayaa magaalooyinka Buurtinle iyo Xarfo ku qabatay shirar wacyigelin ah oo ku saabsan baahinta shuruucda, siyaasadaha iyo xeerarka deegaanka ee ay diyaarisay wasaarada Deegaaka, Beeraha iyo Isbedelka cimilada, shirarkaas ayaa waxaa loo qabtay qaybaha kaladuwan ee bulshada gaar ahaana dadka kudhaqan deegaanada hoosyimaada degmooyinkaas iyo Miyigaba.
Wasaarada Deegaanka oo dhagax dhigtay mashaariic Cusub.
Wasiirka cusub ee Wasaarada Deegaanka oo xilkii la wareegay.